Marika Android izay handefa telefaona mivalona amin'ny 2019 | Androidsis
Fandraisana finday inona no ho hitantsika amin'ny Android amin'ity taona ity?
Eder Ferreño | | Fitaovana Android, Finday
Fantatray nandritra ny volana maro fa ny finday avo lenta dia iray amin'ireo fironana lehibe amin'ity taona ity amin'ny Android. Amin'izao fotoana izao, marika isan-karazany mamolavola finday avo lenta finday. Mianatra tsipiriany misimisy kokoa izahay ary misy ny sasany izay tena akaiky ny fandefasana azy. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia angoninay ireo telefaona an'ity karazana ity izay antenaina hahatongavantsika amin'ny taona 2019.
Koa satria betsaka ny vaovao momba ny finday avo lenta hatreto. Mampanantena izy ireo fa ho revolisionera amin'ny Android. Noho izany, tsara ny mahafantatra ny toetran'ireto maodely voalohany ireto izay antenaina hapetraka amin'ny taona 2019 eny an-tsena.
Samsung no marika izay vaovao bebe kokoa no mamorona amin'ny findainao miforitra. Soa ihany fa hatao ao ny fampisehoana roa herinandro fotsiny, ka tsy mila miandry ela loatra vao mihaona aminy. Ary koa, mety ilay fitaovana ananantsika ny fampahalalana betsaka indrindra hatreto. rehefa ny famelabelarany tamin'ny Novambra ary hetsika manokana ao amin'ny CES 2019, izay nanome anay data marobe momba ity maodely ity. Voantso ho iray amin'ireo sainam-pirenena amin'ny Android amin'ity taona ity.
Ho fanampin'izay, mitohy ny fahatongavan'ny vaovao sy ny fivoahana vaovao momba ity smartphone ity. Amin'ny tranga sasany dia ny Samsung ihany no nandefa io fampahalalana io taminay, toy ny horonan-tsary nahitanao ilay fitaovana ity herinandro ity. Tao anatin'ny roa herinandro monja, 20 feb, hihaona amin'ny finday avo lenta voalohany avy any Samsung izahay.
Huawei dia iray amin'ireo marika Android miasa amin'ny finday avo lenta avoakany. Ny marika sinoa dia manana hetsika voalahatra ho an'ny 24 ho an'ny Febroary, izay raisina ho azy fa hahafahantsika mahafantatra ity finday ity. Ny afisy nampiasain'ny marika hanaovana dokam-barotra dia efa manondro fa miatrika smartphone miforitra isika. Ho fanampin'izany, amin'ity herinandro ity ny mandika voalohany an'ny telefaona ity.
Na dia ny zava-misy aza dia amam-bolana maro no nilazana fa handeha i Huawei asehoy ny finday avo lenta ao amin'ny MWC 2019. Smartphone iray ihany koa ny voalohany amin'ny marika sinoa tonga miaraka amin'ny 5G. Ka io koa dia iray amin'ireo voalohany amin'ny Android manana fifanarahana.
Volana lasa izay ny tsaho momba ny fisian'ny telefaona azo ahodina voalohany an'i Xiaomi. Ny marika sinoa dia manatevin-daharana ity lisitry ny mpanamboatra Android miasa amin'ny telefaona an'ity karazana ity. Ary koa, tato ho ato efa tafaporitsaka ny horonantsary voalohany momba ity fitaovana ity. Lahatsary iray ahitanao ny famolavolana an'ity fitaovana ity, ankoatry ny fomba fiasan'ny rafitra nofidian'ny marika sinoa ho an'ny finday avo lenta.
Amin'ny lafiny iray dia tsy nahagaga izany, satria fantatra fa noho io finday azo folaka io dia manana i Xiaomi nangataka fanampiana tamin'i Samsung, ao amin'ny faritra aseho. Noho izany, mampanantena zavatra betsaka ity fitaovana ity, izay tsy isalasalana fa hanazava izany mazava tsara ny marika dia iray amin'ireo zava-baovao indrindra amin'ity sehatra ity. Hatreto dia tsy fantatray hoe rahoviana no ho tonga ity modely ity.
Marika Android iray hafa miasa amin'ny finday avo lenta ankehitriny ny LG. Volana vitsivitsy lasa izay fa ny tsaho voalohany dia nanomboka ny fampandrosoana ity smartphone ity tamin'ny marika koreana. Tonga tsikelikely ny vaovao mivaingana hafa, toy ny daty fametrahana azy an'ny maodely io. Na dia tsy naseho aza izany tao amin'ny CES 2019, antenaina fa ho tonga mandritra ny taona 2019 izy io.
LG dia miloka amin'ny rafitra hafa noho ny marika hafa amin'ny Android. Hatramin'ny azy, ny marika dia miloka amin'ny telefaona miaraka aminy efijery faharoa azo ampiarahina. Izay mamela ny avo roa heny ny haben'ny telefaona. Na dia zavatra mbola tsy voamarina aza izany. Saingy mampanantena izy io fa ho maodely mahaliana indrindra.
Amin'ny tranga Motorola, Nanomboka tamin'ny volana Aogositra izahay no nanomboka nitete momba ity smartphone finday azo atao ity. Ny marika dia efa manana patanty voasoratra anarana marobe, ary tombantombana izany ho endrika vaovao amin'ny RAZR angano io. Hatramin'izao, na dia efa maromaro aza pantera, tsy misy fampahalalana manokana momba ny fahatongavany. Na dia misy aza ny haino aman-jery sasany milaza fa hatao amin'ny volana Febroary.
Saingy, mazava fa ho tonga amin'ny taona 2019 izy io, izay mahatonga ny lisitry ny marika amin'ny Android miaraka amina telefaona mihombo kokoa hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fandraisana finday inona no ho hitantsika amin'ny Android amin'ity taona ity?
Ny takelaka tsara indrindra omena amin'ny Andron'ny mpifankatia
Ho tonga miaraka amin'ny smartphone vaovao 26 amin'ny MWC 2019 ny energizer